Nkà | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Nkà ihe ọmụma
Kọwaa ihe akụkọ akụkọ "Ryaba hen"
Kọwaa ihe akụkọ akụkọ "Ryaba hen" Akwa nne nne ochie, nnụnụ a na-ekwu okwu nfe dị mfe Nke a bụ akụkọ dịtụ iche, mere maka ntakịrị, banyere Adam na Iv, ebe nna nna ya na nwanyị ahụ - Adam na…
Ọ nwere ike ịhụ mmadụ abụọ n'anya n'otu oge ahụ?
Ọ nwere ike ịhụ mmadụ abụọ n'anya n'otu oge ahụ? Ọ dịghị !! nke a abụghị ịhụnanya !! *** Ma eleghị anya Ị nwere ike!))) Otu n'ime ndụ n'ezie, onye ọzọ n'ime mebere !!))) Dịka ọmụmaatụ, Onye Nleta Ochie!)) Obi ụtọ ...
Kedu ihe okwu ahụ bụ “echiche” pụtara?
Kedu ihe okwu ahụ bụ “echiche” pụtara? Echiche bu ihe ghoro. . echiche mara mma nke nwere akụkọ ọgụgụ isi miri emi. . nguzo ya dikwa ka ntughari uche, ma odi ihe di iche na ntinye uche onwe ya…
Kedu ihe mmalite Apolloic na Dionysian? Kedu ihe dị iche?
Gịnị bụ ụkpụrụ Apollonian na nke Dion? Kedu ihe dị iche? Ihe dị iche na oghere na ọgba aghara, ọkụ na ọchịchịrị. Onye dere akwụkwọ a, o doro anya, Nietzsche na "ọmụmụ nke Ọdachi ...". ———————————————————- APOLLONIC NA DIONYSIAN…
Ụkpụrụ nke Geiger Counter. Na nkenke
Ofkpụrụ ọrụ nke counter Geiger. Na nkenke Shkryab-shkryab ... The Geiger Muller cylindrical counter mejupụtara paịlị nchara ma ọ bụ iko tube metallized site n'ime, yana obere mkpa nke agbatị si na axis nke cylinder. The eri na-eje ozi dị ka anode ...
Kedu ihe bụ isi nke echiche ụwa nke Renaissance?
Kedu ihe njiri mara nke echiche ụwa gbasara mmadụ Renaissance? Echetaghị m ebe mpempe akwụkwọ a si. Pịnye mkpụrụ okwu ole na ole na ịntanetị site na ya - ị ga - ahụ. N’ebe igba ohu nke madu gabu ihe ohuru mmadu…
Ònye bụ onye na-emegide ya? Kedu ka o si dị iche na protagonist? ihe mbụ na-abata n'uche
Ònye bụ onye na-emegide ya? Kedu ka o si dị iche na protagonist? ihe mbụ nke na-abata n'uche bụ Loch abụọ bụ ndị na-etinye aka na ngwụsị nke mgbanwe, ya mere na mmepe nke aha ha, gbanwere abstraction, ...
Nye ihe atụ nke sophism
Nye ihe atụ nke ịba ama bụ atụ nke ndị kwere ekwe “igosipụta” ịdị adị nke Chukwu site na iji iwu nke abụọ nke arụmọrụ arụmọrụ - ya bụ na iwu a na-egosi na ekere uwa niile. Nke a bụ ihe gbasara sayensị. ọ bụrụ ...
Gwa anyị ụdị echiche, ọkacha mma na ihe atụ.
Gwa anyị ụdị echiche, ọkacha mma na ihe atụ. Ndị mmadụ na-ede akwụkwọ na isiokwu a, na ebe a, ngwa ngwa chọrọ. Zitere gị gaa na saịtị ụfọdụ? ma ọ bụ ị nwere ike ịchọta na Google, olee otú ...
Enwere m ike ma ọ bụ nwee aka nri?
EGO EGO MAKA Ọ B ORR RIGH MMA Ikike M nwere? Naanị ikike ịma jijiji nke ọma ... inwe ya siri ike - ọ dị mfe ịghara inwe! ! zere ikike - ma ị ga - enwe ọ happyụ. Na-eche gị ...
Gịnị ka ịnyịnya pụtara na ihe atụ ụwa?
Gini ka inyinya putara na akara uwa? Ndị Slav nwere ịnyịnya na-enweghị isi - onye ozi ọnwụ. Sori amaghị ihe ọ bụla ọzọ, ọ nwere ihe ọ pụtara. Kedu ka ike anyanwụ si acha ọcha, ọla edo ma ọ bụ nke na-acha ọkụ na-apụta ...
Gịnị ka obe Ndị Kraịst na-anọchite anya ya? Shiol? Ma ọ bụ ihe m na-amaghị?
Gịnị ka obe Ndị Kraịst na-anọchite anya ya? Shiol? Ma ọ bụ ihe m na-amaghị? Okpukpe Ndị Kraịst adịghị adị. E nwere ndị Ijipt, Celt Latin Spanish Arkhangelsk Lithuanian Lorraine Papal Orthodox Byzantine Armenian St. Andrew ...
Kedu ụdị nke ụwa dị? enyemaka
Typesdị ụdị ụwa si dị? enyemaka "Enwere ụzọ dị iche iche nke iji nweta akụkọ ụwa, nke gbakwasara na ntọala ọgụgụ isi na usoro usoro dị iche iche. Ndị edemede dị iche iche na-egosi ọdịiche dị iche iche: ụwa okpukperechi, nyocha ụwa sayensị, okike ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụwa, echiche ụwa. Mgbe ụfọdụ ewepu ...
Kedu ọrụ nke nkà ihe ọmụma na ụwa nke oge a ????
Kedu ihe bụ ọrụ nke nkà ihe ọmụma n’ụwa nke taa? na-enye echiche nke echiche, mmetụta na mmetụta…. Eziokwu ahụ na ọ nweghị mmetụta ọ bụla na onye ọ bụla)) site na ahụmịhe na-egbu mgbu ... N'agbanyeghị na iko mba ụwa…
Gịnị bụ iguzosi ike n'ihe? Gịnị bụ iguzosi ike n'ihe? Na plz kọwaa ihe nkebi ahịrịokwu ahụ "ị na-eguzosi ike n'ihe nye ndị ị hụrụ n'anya"
Gịnị bụ iguzosi ike n'ihe? Gịnị bụ iguzosi ike n'ihe? Na plz kọwaa ihe nkebi ahịrịokwu ahụ "ị na-eguzosi ike n'ihe nye ndị ị hụrụ n'anya" Nke a bụ ntụkwasị obi nye iwu, ụkpụrụ, ụkpụrụ (ike, wdg). Maka iguzosi ike n'ihe ...
eziokwu dị ka echiche nkà ihe ọmụma
eziokwu dị ka usoro echiche nke sayensi 1. Nkọwapụta oge gboo nke eziokwu nke Aristotle nyere bụ nnabata nke nkwupụta nke eziokwu. Logic enweghị ihe jikọrọ ya na eziokwu, ọ na-arụ ọrụ naanị na nkọwapụta nke ya, ka ...
na-amụ banyere isiokwu nke mgbagha \_\_
na-amụ banyere isiokwu nke ụzọ mgbagwoju anya na ụzọ ndị ọzọ ga-esi nweta ụfọdụ ikpe. ezi, ma ọ bụ karịa, echiche mmadụ. Ezigbo uche
kedu ihe ọ pụtara ịchụ nwoke? kedu otu ọ bụ? N'ihe banyere akara dị a doaa ka ị ga-ekpebi ma nwanyị na-achụgharị ma ọ bụ? Ndi umu nwanyi nile bu coca
kedu ihe ọ pụtara ịchụ nwoke? kedu otu ọ bụ? N'ihe banyere akara dị a doaa ka ị ga-ekpebi ma nwanyị na-achụgharị ma ọ bụ? Ọ bụ ụmụ nwanyị niile bụ coca Ohaneze enweghị ike izo ya. Coquetry bụ mgbe obi ike dị…
"Ị chọrọ nnukwu ịhụnanya ma dị ọcha?" "Ma onye na-achọghị ya?" "Mgbe ahụ bịa, ka ọ na-agba ọchịchịrị, gaa na hayloft."
- Chọrọ nnukwu mana ịhụnanya dị ọcha? - Ma onye na-achọghị ya? - Abia, dika ojila n’abali, rue hayloft. Nke a sitere na usoro Lovehụnanya. Enweghị mmụọ ma ọ bụ omume ọma ...
Kedu ihe kpatara ya? Ihe kpatara ya bu ihe mbu nyocha. Ihe kpatara ya bu 1) ihe ndabere, ihe anakpo omume ufodu; Nleputa: ezigbo ihe kpatara ochi, chiri ochi n’enweghi ihe kpatara ya, nihi na…. n'ihi n'eziokwu na ....; 2) bụ ihe na - akpata ihe na - akpata, na - akpata ọdịdị nke ihe ọzọ dị na - agba ọsọ bụ ihe omume na - enye ihe mgbaàmà ...